Mpanamboatra sy mpamatsy resin-tsolika Macroporous ambongadiny | Dongli
Resins Rafitra Matrix Polymer Fisehoana endrika ara-batana asavondrona Ionic teny Total Capacity meq / ml Votoatin'ny hamandoana Haben'ny potika MG Fandefasana Lanja g / L
DL401 Macroporous Ploy-styrene miaraka amin'ny DVB Opaque Spherical Beads Asidra Iminodiacetic N / A 0.8 55-65% 0.425-1.2 750
DL402 Macroporous Poly-Styrene miaraka amin'ny DVB Vakana boribory fotsy Aminophosphonic N / A 0.9 55-65% 0.425-1.2 750
DL403 Macroporous Poly-Styrene miaraka amin'ny DVB Opaque Spherical Beads Methylglucamine Base maimaim-poana 0.9 50-60% 0.425-1.2 750
DL405 Macroporous Poly-Styrene miaraka amin'ny DVB Opaque Spherical Beads Thioureido H 0.8 45-50% 0.425-1.2 750
DL406 Macroporous Poly-Styrene miaraka amin'ny DVB Vakana boribory boribory opaque volo Al 0,5 50-55% 0.30-1.20 750
DL407 Macroporous Poly-Styrene miaraka amin'ny DVB Vakana boribory fotsy RN (CH3)2(C2H2OH)- Cl 0.9 50-56% 0.30-1.20 700
DL408 Macroporous Poly-Styrene miaraka amin'ny DVB Biriky Mena ka hatramin'ny vakana boribory volontsôkôlà FeO (OH) 0.6 50-56% 0.30-1.20 700
DL410 Macroporous Poly-Styrene miaraka amin'ny DVB Opaque Spherical Beads Ammonioma Quaternary Cl 0.75 40-50% 0.30-1.20 700
Amin'ny ankapobeny, ny resina misy diplaoma avo lenta dia manana fikajiana mahery kokoa amin'ny ion, ary ny fisafidianana resina macroporous dia kely noho ny an'ny resina karazana gel. Ny fifantenana dia lehibe kokoa amin'ny vahaolana maloto ary kely kokoa amin'ny vahaolana mifantoka.
Ny resina macroporous dia atao amin'ny alàlan'ny fampidirana porogen amin'ny fanehoan-kevitra polymerization mba hamorona rafitry ny firafitra spons porous, miaraka amina micropores marobe ao anatiny, ary avy eo mampiditra vondrona fifanakalozana. Ny habe sy ny habetsaky ny resina mando dia azo fehezina mandritra ny famokarana. Ny velarantanin'ilay fantsona dia azo ampitomboina mihoatra ny 1000m2 / g. Izany dia tsy vitan'ny manome fifandraisan-davitra ho an'ny fifanakalozana ion, mampihena ny halaviran'ny fampielezana ny ion, fa mampitombo ihany koa ireo foibe mavitrika. Amin'ny alàlan'ny herin'ny van der Waals eo anelanelan'ny molekiola, dia afaka mamokatra adsorption molekiola izy, izay afaka manaparitaka karazana akora tsy ionic rehetra toy ny carbon activated ary manitatra ny asany. Ny resina macroporous sasany izay tsy misy vondrona mifanakalo dia afaka manaparitaka sy manasaraka karazana akora maro samihafa, toy ny phenol amin'ny rano maloto zavamaniry.
Rehefa avo ny sira ao anaty rano, dia azo ampiasaina amin'ny famoahana rano mangatsiaka mialoha ny rano ny electrodialysis, ny osmosis miverimberina ary ny dingana hafa.
Ny pisidinan'ny resin-tsolika kitapo hazo dia misy endrika kristaly sy fitaovana polymer CSP. Tena mety amin'ny rindrina rindrina ampiasaina ho fiarovana ny fantson-drivotra, fanangonana fantsona ary tontonana fanaraha-maso ao amin'ny rafitra. Noho ny fifandanjan'ny adsorption ny mason-drano RF ambonin'ny rano dia azo ahena ny vidin'ny fananganana, ny vokatry ny fanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana, ny rafitra famokarana hazo ary ny rafitra paompy dia azo noforonina tsara kokoa amin'ireo lafiny ireo.
Ankoatr'izay, ny fanafarana hazo dia manome karazana tsindry amin'ny fitsaboana amin'ny rindrina ambonin'izany, izay tsy vitan'ny fanaraha-maso ny vidin'ny adsorption sy ny fanoherana ny hamandoana, fa koa ny vokatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fizotran'ny urbanization, ary ny fampiasana faharoa dia bebe kokoa idealy.
Teo aloha: Resin ny fifanakalozana anion base base
Manaraka: Resy fifanakalozana base anion mahery